Rehefa manangana sekoly ny Sandals Resorts dia manangana ny fiarahamonina izany
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Rehefa manangana sekoly ny Sandals Resorts dia manangana ny fiarahamonina izany
Rehefa nanokatra ny Sandals Resort voalohany i Gordon "Butch" Stewart dia nanana andraikitra lehibe iray izy: ny resort dia takiana amin'ny sekoly iray ao amin'ny fiarahamonina. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia tokony hikarakara izany ary hiantoka fa ny fotodrafitrasa sy ny mpianatra dia nanana izay nilaina mba hahomby. Telopolo taona mahery izay, ary ny fiantombohan'ny orinasa iray fanoloran-tena ho an'ny fiaraha-monina sy ny fomban-drazana fanompoana izay nokolokoloin'ny Sandals Resorts International (SRI).
"Manana ny loharanom-pahalalana, noho izany, isika handray andraikitra," hoy i Stewart, filoha sady mpanorina ny sandals Resorts sy ny Beach Resorts.
Androany, ny toeram-pialan-tsasatra rehetra eo ambanin'ny sora-baventy Sandals Resorts InternationaI dia takiana mba hanangana sekoly ary amin'ny toe-javatra sasany, vondrom-piarahamonina iray manontolo mba hahazoana antoka fa zaraina araka izay azo atao ny hafatra momba ny fahasalamana, fiarovana, fiahiahiana ny tontolo iainana, ny fiaraha-monina ary ny fotoana mety. Manampy amin'ny fanomezana laboratoara informatika vaovao sy fananganana efitrano fianarana fanampiny ka fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra mamiratra nefa sahirana ary mampiantrano ny andro fiasana dia manome torolàlana sy mizara ny fahalalany sy ny loharanon-karenany amin'ireo mpifanolobodirindrina any Karaiba ny ekipa SRI.
Sandal Resorts ao amin'ny fiarahamonina.
Tamin'ny 2007, Sandals Resorts dia nahazo ny mari-pankasitrahana Condé Nast Traveler World Savers ho an'ny programa Adopt-A-School sy ny asan'izy ireo any amin'ireo vondrom-piarahamonina Karaiba. Nandritra ny 25 taona mahery, Condé Nast dia nanaiky ny hotely tsara indrindra, sambo fitsangantsanganana ary seranam-piaramanidina.
Sandal and Beaches Resorts malaza eran'izao tontolo izao dia niova avy amina marika iray sy toeram-pilalaovana iray any Montego Bay, Jamaika, mba ho lasa iray amin'ny anarana fandraisana olona malaza sy be mpitia indrindra eran'izao tontolo izao. Miaraka amina marika 5 sy fananana 24 any amin'ny firenena 7, anisan'izany i Antigua, The Bahamas, Grenada, Barbados, Jamaica, Saint Lucia, ary Turks and Caicos, Sandals and Beaches Resorts no mpitarika ny traikefa fialan-tsasatra any Karaiba ary mbola manolo-tena mafy amin'ny faritra, nanokana ny tenany manokana amin'ny fivoaran'ny toeram-pialana voly izay, araka ny tenin'ny filoha sy ny mpanorina Gordon "Butch" Stewart, dia "mihoatra ny andrasana" ho an'ny vahiny, ny mpiara-miasa ary ny olona miantso ny tranon'ny Karaiba.
Arizona, Florida, Texas: Inona no mahatonga ny fiakarana tranga COVID-19?
Ny famonoana ny casino dia mitentina 100 tapitrisa $ amin'ny vola miditra ao Michigan